Zimbabwe Travel Destination, Travel Disease Risks, and Vaccination Recommendations
Zimbabwe Vaccination Recommendations
The following travel vaccinations are recommended when traveling to Zimbabwe, based on historical disease patterns in that country. They represent the typical diseases endemic or prevalent in Zimbabwe for which there are highly effective vaccines available offering strong protection against the disease.
There are may be other diseases which are prevalent in Zimbabwe but which are not shown here because either there are no vaccines available to combat the disease, or because the vaccines available are not highly effective in protecting travelers from the disease. In these cases, other travel health protection measures should be followed. Please click on the "Read More" links to the right of each travel disease listed below to find out more about these other travel health precautionary measures while traveling to Zimbabwe.
In addition to the typical or endemic disease pattern information presented here, please check the Global Travel Alerts and Travel Health Advisories page which contains the latest information on any current outbreaks that may be occurring in Zimbabwe.
In addition to reading the vaccination recommendations for Zimbabwe on this page, booking a consultation appointment with your local travel clinic or nearest immunization center will help ensure you are aware of all the vaccination requirements and other health precautions advised while traveling to Zimbabwe.
CDC Vaccination Recommendations for Zimbabwe in Southern Africa
Recommended for all unvaccinated people traveling to or working in Zimbabwe, especially if staying with friends or relatives or visiting smaller cities, villages, or rural areas where exposure might occur through food or water.
For more information on travel health risks and vaccination recommendations while traveling to Zimbabwe,
please see the CDC website entry for Zimbabwe.